ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – Nyang Media
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံ အဟောင်းကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ပုံ အဖြစ် ဖော်ပြနေ
Fact Checkဖေ‌ဖော်ဝါရီ 01, 2021
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံ အဟောင်းကို သည်နေ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ဓာတ်ပုံ အဖြစ် ဖေ့စ်ဘွတ် ပလက်ဖောင်းမှာ လူအများက ဖော်ပြနေတာရှိပါတယ်။ တပ်မတော်က သည်နေ့ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ် နဲ့ အတူ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့...
Fact Checkဒီဇင်ဘာ 07, 2020
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးလို့ တစ်လပြည့်ဖို့ တစ်ရက်အလို အထိ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအမှား၊သတင်းအတုတွေ က ဆက်တိုက်ဖြန့်ချိနေဆဲပါ။ သည်တစ်ခါ ပြောပြလိုတာကတော့ ဒေါ်စုကြည်၏ ဝန်ခံချက် အပေါ် တပ်မတော်တုံ့ပြန်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်အကြောင်းအရာကို...
Fact Checkဒီဇင်ဘာ 06, 2020
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားတွေကို အကြောင်းအရာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြန့်ချိနေမှုဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီးလို့ တစ်လ ပြည့်ခါနီးမှာတောင် အရှိန်မပြတ် ရှိနေတုန်းပါပဲ။ သည်တစ်ခါ ပြောပြလိုတာကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ တပ်မတော်အနေနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းပန်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။...
Fact Checkအောက်တိုဘာ 26, 2020
ဝရမ်းပြေး ဦးဝီရသူ စကားပြောနောက်ခံနဲ့ ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကို ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်ပါတီ ကို ရွေးမလဲ အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ် က အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ဝရမ်းပြေး ဦးဝီရသူနောက်ခံအသံ နဲ့...
Fact Checkအောက်တိုဘာ 13, 2020
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုံဖျက်ထားတဲ့ အချက်အလက်အမှား တစ်ခုကို ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေနေသူတွေရှိပါတယ်။ "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်ဘာသာဝင်လဲ ထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့မေ့နေတယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလို ဖော်ပြဖို့ရန် အခက်အခဲ ရှိနေပါတယ် ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ စဉ်းစားရတော့မယ်"...
၂၀၂၀ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်လို ပြောခဲ့လား
Fact Checkအောက်တိုဘာ 12, 2020
နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော် မပါဝင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်း ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြန်လည် မျှဝေနေသူတွေရှိပါတယ်။ သည်သတင်းကို သတင်းအမှန်သိ ဆိုတဲ့ Facebook Page တစ်ခုကနေ အောက်တိုဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ က ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး...
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တပ်မတော် အကြောင်း ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အတု
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နာမည် တွေကို အလွဲသုံးစားပြုထားတဲ့ အမိန့်အတု အကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်။ ၂၀၂၀၊စက်တင်ဘာလ(၂၉ ) ရက်နေ့ စွဲ နဲ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမိန့်စာအတု မှာ " ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး စစ်ဆင်ရေးအား...
စက်တင်ဘာ(၂၅) ရက်နေ့ဟာ အမေရိကရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေ့ ဆိုတာ ဟုတ်သလား
Fact Checkစက်တင်ဘာ 28, 2020
စက်တင်ဘာ(၂၅) ရက်နေ့ ၊အမေရိကရဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေ့သတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖြန့်ချိထားတဲ့ Screen shot တစ်ခုကို လူမှုကွန်ရက်မှာ လူအများ မျှဝေနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သည် Screen shot ကို ဦးသန်းထွန်း လို့အမည်ရတဲ့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်က ၂၀၂၀၊...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးပြီး ဆိုတဲ့ လုပ်ကြံသတင်းအမှား ဖြန့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးပြီ ဆိုပြီ ဖြန့်ချိထားတဲ့ လုပ်ကြံသတင်းမှား တစ်ပုဒ်အကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ်။ သည်သတင်းအမှားကို Nyo Win လို့အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်ပိုင်ရှင် က စက်တင်ဘာလ(၂၂) ရက်နေ့ ည (၁၀) နာရီခန့်မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။( သည်နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်)...